Caddaaladda Bulshada - Cabdiraxmaan Cirro - Presidential Candidate- WADDANI-Somaliland
Dawladda xisbiga WADDANI waxa u qorshaysan in ay hawl-geliso xoogga iyo maskaxda dhallinyarada miyi iyo magaaloba si ay dalkooda u dhistaan.
Dhallinyarada iyo Siyaasadda
Xisbga WADDANI waxa uu hore hormuud uga noqday jebinta dabarkii sharci ee da’da ee ka hor-taagnaa dhallinyaradu in ay ka qayb noqdaan golayaasha degaanka ee dalka. Sidoo kale, Xisbiga WADDANI waa xisbigii ugu horeeyey ee qabtey shirweyne dhallinyaro oo ay ka soo qayb-galeen ergooyin isaga kala yimid dhammaan gobollada dalka.
Dib u eegista da’da ka qaybqalka doorashada golaha Wakiillada ee Dastuurku xadeeyey.
In quwadda dhallinyaradu ay si mug leh uga muuqato Xukuumadda Xisbiga WADDANI mid dhexe, mid gobol iyo degmoba.
Inay dhiirri-geliso ka qayb-galka dhallinyarada ee xisbiyada siyaasadda, WADDANI ahaanna tusaale ugu noqdo.
Dhallinyarada iyo Dhaqaalaha
Xisbiga WADDANI waxa uu rumeysan yahay in khayraadka ugu badan ee uu dalka JSL leeyahay yahay dadkiisa kaas oo 70% ay tahay dhallinyaro ah xoog iyo maskax cusub oo dalkan dhisan kara, lana jaan-qaadi kara dhiggooda caalamka.
In loo qoondeeyo ugu yaraan 40% shaqooyinka dawladda ka soo baxa iyo kuwa mashaariicda deeq-bixiyeyaashaba iyo in shaqooyinka muwaaddiniintu qaban karayso aan dibedda shaqaale looga doonin.
Maalgelinta carwo sannadle ah oo Tartanka Mashaariicda Hal-abuurka Dhaqaalaha ee Dhallinyarada ah, kaas oo sannadkiiba mar la qaban doono. Xukuumadda WADDANI iyada oo la kaashanaysa shirkadaha gaarka ah ee gudaha iyo caalamkaba waxay maalgelinaysaa Mashariicda muhiimadda dhaqaale leh ee ku guulaysta tartanka.
Dhismaha xarumo kaalmeeya hirgelinta mashaariicda iyo hal-abuurka dhallinyarada oo magaalo-madaxda gobol kasta ku yaalla, oo ka taageerta dhalinyarada warsiinta iyo isku-xidhka shirkadaha waaweyn, tababarka, diyaarinta qorshaha mashruuca, qiimaynta sida uu midho-dhal u noqon karo iwm.
Dhiirri-gelinta mashaariicda ganacsiga ICTga ku dhisan sida: xarumaha Internet-ka, dugsiyada computerka lagu barto, baraha daabacaadda, xayeysiisyada, sub-station-nada shirkadaha isgaadhsiinta meelaha aan lahayn, xarumo loogu adeego bulshada tuulooyinka iyo meelaha ka durugsan suuqa weyn.
Dhiirri-gelinta mashaariicda ku saabsan wax-soo-saarka gudaha, sida xoolaha, beeraha, kalluumaysiga iyo Xabkaha.
Dhiirri-gelinta hal-abuurka iyo curinta technoolajiyada, wax-soo-saarka iyo adeeggaba.
Dhismaha xarumaha dhallinyaradu ku kulmaan iyo ururradoodu si aqoon kala korodhsi iyo khibrad isweydaarsi gudahaooda ugu sahlanaado (youth to youth support).
Xukuumadda Xisbiga WADDANI waxay mudnaan siineysaa horumarinta ciyaaraha kala duwan iyo ku baahinta dalka gobolladiisa oo dhan si loo dhiirri-geliyo dhallinyarada hibada u leh, isla markaana loo xaqiijiyo is-dhex-galka bulsho iyo ku-dhaqanka tartanka xalaasha ah.
Tayeynta Wasaaradda ciyaaraha iyo dhallinyarada si ay u fuliso hiigsiga qaranka ee ka-qayb-galka ciyaaraha heerarka
Horumarinta ciyaaraha iyo dhiirri-gelinta naadiyada gaarka loo leeyahay.
Isku-xidhka shirkadaha waaweyn iyo naadiyada ciyaaraha si ay u maal-geliyaan ciyaartoyga soo baxaya ee tartammada goboleed iyo dunidaba hiigsan kara.
Dhiirri-gelinta iyo kobcinta ciyaaraha wareegyada: heer qaran, gobol, degmo iyo dugsiyadaba. Waxay dhiirri-gelin doontaa tartamyaasha hibada leh ee halkaa ka soo baxa una samayn doontaa hab gacan-qabasho ah oo ay ku sii koraan.
Maal-gelinta xarumaha isbootiga sida: garoommada, istadiyamyada iyo xarumaha ciyaaraha fudud.
Dhiirri-gelinta qaybaha kala duwan ee ciyaaraha kala duwan oo dalka lagu baahiyo.
Dhismaha iyo hawl-gelinta xarumo lagu tababaro ciyaartoyga, tababare-yaasha iyo garsoore-yaasha ciyaaraha.
Samaynta kooxo qaran (National Teams), kuwaas oo ay u qaaban-qaabinayso ciyaaro saaxiibtinnimo oo dhex mara dalalka Gobolka iyo kuwa aynu saaxiibka nahay ee kaleba.
Dhiirri-gelinta in qurbajooggu ay taageeraan horumarka ciyaaraha, waayo-aragnimana u keenaan oo la mataaneeyo magaalooyinka Somliland iyo kuwa adduunka.
Marti-gelinta iyo ka-qayb-galka ciyaaraha gobolkeena, afrika, iyo kuwo caalamkaba.
Xisbiga WADDANI wuxu tahriibta u arkaa dhibaato weyn oo qaranka la soo deristay, waxaanu siinayaa fiiro gaar ah sidii uu maaro ugu heli lahaa. Xukuumadda Xisbiga WADDANI waxa kale oo ay tahriibta u aqoonsan tahay nooc ka mid ah ka-ganacsiga bini-aadamka. Keliya ma ah in ayu luminayno khayraadkeennii ugu qiima badanaa oo ah da’yarta weliba wax la baray ee waa tacluus qaranka ku habsatay oo caafimaadkiisa guud samayn xun ku leh. Maalin walba oo ina soo marta ama reero ayaa geeriyeysan oo lumiyey kuway jeclaayeen, ama qaar baa safar qasab ah ugu tallaabaya dalalka deriska ah si ay war uga helaan ehelkooda iyo carruurtooda tahriibtay. Qaar kale ayaa iyana la kacaa-kufaya in ay uruuriyaan madax- furashada uu soo dalbadayy “Ma-gafe”. Sidaa darteed, waxaynu nahay qaran ku jira diiqad joogta ah (nation in distress).
Samaynta wacyi-gelin ballaadhan oo dhallinyarada ah, waxa warbixinno laga uruurin doonaa dadkii tahriibey oo hubaashii dhex-galay badweynta dhaqammada shisheeye ee dhibaatooyinku ku habsadeen.
Qaban-qaabada kulammo iyo shirar dhallinyarada u gaar ah oo ay kaga doodaan aafada tahriibta: sababaha iyo sida loo maarayn karo, oo talo u soo jeediyaan dawladdooda.
Xoogga saaraysaa sidii ay deeqo waxbarasho ugu heli lahayd dhallinyarada Somaliland oo adduunka uga raadin lahayd.
Ku dadaali doontaa in muwaaddiniinta Jamhuuriyadda Somaliland ku dhoofaan baasboorkooda oo uu noqdo mid ay kaga maarmaan halaagga tahriibta.
Waxay dhiirri-gelin doontaa in ay dhallinyarada Somaliland adduunka ku dhexgalaan aqoon, dhaqaale iyo xirfadda ciyaaraha oo aanay tahriib miciinsan.
Diyaarinta qorshayaal badbaado oo ka-hor-tag ah, weliba xilliyada dhallinyaradu ay u heellanaan karto tahriibka (early warning system).
Dhismaha rajo iyada oo uu WADDANI ugu noqon doono tusaale isla markaana dhallinyarada lagu jihayn doono dhismaha qaranka ee dhinacyada siyaasadda, dhaqaalaha iyo arrimaha kale ee bulshdada taas oo abuuri doonta dareen iyo tamar cusub oo is-beddel.
Tallaabo ka qaadaysaa ciddii lagu helo ka faa’iidaysiga tahriibka iyada oo adeegsan doonta sharciga dalka iyo kuwa caalamiga ahba.
Samaynta Komishan ka mas’uulah baadhidda denbiyada tahriibta bilaw ilaa dhammaad, si loo soo saaro siyaasad cad oo ku wajahan ka-hortagga denbiyadaas. Sidaas oo kale waxa la samayn doonaa diiwaanka (database) lagu keydiyo dhammaan dadka la waayo. Waxaa iyana macluumaad buuxa laga uruurin doonaa cid kasta oo ku lug ku leh soo-xero-gelinta dadka tahriibaya, dadka baabuurta ku qaada, dadka guryaha lagu qariyo leh, dadka lacagta madax-furashada u kala qaada iyo cidda aakhirka denbigan ka faa’iidda ee dadka dhiiggooda ka ganacsata.
DARYEELKA HAWEENKA IYO QOYSKA
Hooyo caafimaad qabtaa waxay lagama-maarmaan u tahay bed-qabka qaranka. Caafimaadka, taranka iyo haweenku waxay tiir-dhexaadka ka noqon doonaan siyaasadda dawldda WADDANI.
WADDANI, wuxu dammaanad qaadi doonaa xuquuqda haweenka iyo caddaaladda, Waxa la curin doonaa sharci ilaaliya sharafta xaqa bini-aadannimo ee haweenka. Waxaanu meel-marin doonaa dhammaan hababka iyo shuruucda taageerada u ah xuquuqda dumarka. Haweenku waxay Xukuumadda Xisbiga WADDANI ka heli doonaan xaqooda siyaasadeed iyo horumarba ee ku salaysan xurmada ay diinta islaamku siisay.
Xoojinta xurmada qoyska, dhawrsoonaanta guriga, iyo hirgelinta qiyamka diinta iyo dhaqanka habboon.
Taageeridda ganacsiga haweenka iyada oo dib-u-habaynaysa cashuurta maalinlaha ah ee dawladda hoose, si ay gaar ahaan uga khafiifiso dumarka wadhatada danyarta ah.
Furaysaa xarumaha haweenka ee gobol walba, kuwaas oo lagu hirgeliyo tababarada haweenka ee xirfadda ganacsiga iyo baridda mihnado cusub oo ay ku shaqaystaan.
Gacan-qabanaysaa ururrada ay ka mid yihiin DANWADAAG ee iskaashiga dhaqaale samaystay si ay u sii xoogaystaan.
Ka taageeraysaa dhinaca adeegyada laydhka iyo biyaha xaafadaha barakacayaasha abaaraha ee magaalooyinka waaweyn ka samaysmay, gaar ahaan guryaha haweenku ka madaxda yihiin ee dhallaanka haysta iyada oo la kaashanaysa shirkadaha adeeggaa bixiya.
U-samaynta xamaamyo gaar ah haweenka wadhatada ee suuqyada fadhiya iyo hablaha iskuullada
Dhiirri-gelinta iyo xaqiijinta dumarka iyo habluhu in ay qayb ka noqdaan dhammaan heerarka waxbarashada, in la dhiso xirfadahooda iyo in loo tababaro hoggaaminta.
Hirgelinta olole guud sidii loo joojin lahaa caadooyinka dhaawacaya ama gaar u faquuqaya dumarka, ee ka hor-istaagaya fursadaha nololeed iyo xurmada bani-adaamka.
Taageeridda hay’ado sharci oo si bilaash ah ugu dooda dhibbanayaasha haweenka, gaar ahaan kuwa dhibtu ka soo gaadho kufsiga iyo u-gacan-qaadka.
Hirgelinta cilmi-baadhisyo iyo joogteynta doodo dadweyne oo lagu muujinayo dhaqanka gaboobay iyo fekradaha bulshooyinka Soomaalida ah ee wax u dhimaya caafimaad-qabka, hore-u-socodka dumarka isla makraana hor-istaagaya fursadaha ay ka dhex heleyaan qoyska iyo qarankaba, ee aan sal ku lahayn diinta islaamka.
Taageerada Bulshooyinka Dulman
Xisbiga WADDANI wuxu Ka soo hor-jeedaa ku xad-gudubka xaqa iyo dulmiga ka yimaadda takoorka dhaqanka salka ku haya.
La dagaallanka takoorka iyada oo loo marayo sifo sharci.
Abuurista mashruuc qaran oo ku salaysan kor u qaadidda dhaqalaaha iyo noloshooda kaas oo taabanaya dhiancyada nolosha ee muhiimka ah sida waxbarashada, shaqada, iyo kobcinta hay’ado bulsho oo u adeega miisaaniyad dawladeedna leh.
Sugidda ku noolaanshaha ammaan iyo deggenaansho iyo in ay helaan xuquuqdooda asaasiga ah oo aan lagu tuman.
Ka qayb gelista siyaasadda iyo hoggaaminta heer kasta sida: dalwadda, xisbiyada qaranka iyo ciidammada ammaanka noocyadooda oo dhan.
Gacan-qabashada iyo casriyeynta mihnadaha wax-soo-saar ee ay takhasuska u leeyihiin iyo maalgelinta hal-abuurkooda si kor loogu qaado dakhligooda.
Ilaalinta Faya-qabka Degaanka
Waxa ilaahay ku mannaystay Jamhuuriyadda Somaliland degaan ku hodan ah dhir iyo xayawaanba, laakiin qaybo badan oo ka mid ah khayraadka dabciiga ah ayaa dabar go’ay ama qarka u saaran in ay dabargo’aan. Xukuumadda WADDANI waxaa ka go’an in ay badbaadiso degaanka korna u qaaddo fayaqabkiisa:
Wasaaradda iyo Hay’adaha:Xoojinta Wasaaradda Degaanka, si ay u diyaariso siyaasad qaran oo degaan iyo u diyaarsanaanta aafooyinka degaanka inay xidhiidhiso oo istraatijiyad midaysan ku kulmiso hay’adaha gudaha kuna xidho kuwa caalamka.
Maamulka Dhulka: Dib-u-eegid buuxda oo ku salaysan cilmi-baadhis qoto-dheer taas oo ku aaddan guud ahaanba isticmaalka iyo maamulka dhulka Jamhuuriyadda Somaliland miyi iyo magaalo, bad iyo berriba.
Dhammays-tirka xeerarka loo baahan yahay iyo sugidda habka xallinta khilaafaadka dhulka.
Dhiraynta iyo daryeelka degaanka si muwaaddiniintu u helaan meel ay ku raaxaystaan miyo iyo magaaloba. Waxa la nadiifinayaa dooxyada magalooyinka si dadku ugu nastaan shaqada ka dib.
Cilmi-baadhista Degaanka: Xoojinta awoodda cilmi-baadhista Jaamacadaha iyo mac-hadyada dalka si ay daraasado iyo talo-bixin cimliyeysan uga soo saaraan saamaynta isbeddelka cimilada adduunku ku leedahay wax-soo-saarka dalkeena iyo nolosha dadkeena; iyo sidii aynu u samayn lahayn isbeddel aynu kaga hortegayno dhibaatooyinka isbeddelka cimilada inagaga iman kara.
Isbeddelka Cimilada: Hirgelinta siyaasad iyo istraatejiyo aynu kaga samata-bixinayno habkeenna wax-soo-saar, saamaynta taban ee isbedelka cimiladu ku leedahay iyo sidii aynu wax uga beddeli lahayn hab-nololeedkeenna. Waxaynu xakamayn doonnaa saamaynta xun ee ay isbeddelka cimiladu ku yeelanayso dhaqaalaha xooleheenna nool iyo beeraha.
Xoolo Dhaqidda:Waxay Xukuumadda WADDANI taageeraysaa habka dhaqashada cusub ee “ranching-ka”, calafka oo la beero iyo in loo abuuro dadka miyiga shaqo iyo mihnado ay dhakhli kale ka helaan.
Wacyigelintadadkeenna sidii loo ilaaliln lahaa degaanka dabiiciga ah iyo hirgelinta istratejiyad sidii looga soo kaban lahaa dhibka gaadhay.
Xeerarka:Soo saarista xeerarka daryeelka degaanka iyo hagaajinta maamulka dhulka iyo khayraadka dadka ka dexeeya sida dhul-daaqeenka iyo buraleyda.
Olole Dhir Beerid:Xukuumadda Waddani waxay beeri doontaa illaa 5 malyuun oo geed muddo-xileedkeeda hore, miyi iyo magaaloba, meel walba dhirta ku haboon.
Seeraha:Samayanta seeraha daaqa iyo daryeelka ugaadha dabargo’aysa
Biyo Shubyada:Maamulka biyo-shubyada iyo qorshaha isticmaalkooda.
La Dagaalanka dhuxulaysiga.